Motoblock ithandwa kakhulu ithuluzi lobuchwepheshe esetshenziswa amaholide emapulazini yangasese ukutshala inhlabathi. Lokhu lula elingeyona inkimbinkimbi amayunithi enjalo, futhi izinga kuqhathaniswa okusezingeni eliphezulu kulinywe. Nokho, ukuze uthole Chile ehloniphekile ngokuhamba umsebenzi, kubalulekile ukwazi ukuthi ukuhamba-ngemuva amageja futhi kanjani ukubhekana naso. The kungenzeka enezela ukwakhiwa nezinamathiselo asizayo nazo yelula ukusebenza onobuhle, kuyilapho ukuphoqa abasebenzisi ngempela ukukufunda ngokuningiliziwe imithetho futhi ezisebenza kumodi ekhethekile.
Njengoba amageja ukuhamba-ngemuva?
Ngo inqubo ukutshalwa kuhilela umsiki ekhethekile - emizimbeni esebenza ngokuqondile wahlanganyela hoeing. Enye incenye lebalulekile iyona ngikwazi ukuqala, okuvumela ukuba ulungise ukucutshungulwa ukujula. Njengomthetho, umkhawulo ngikwazi ukuqala ifinyelela 25 cm. Ukuqonda indlela amageja tillers, ukuvumela ngokufanele ulungise ezingeni lapho ukutshala inhlabathi kuzokwenziwa. izindwani Izungezisa eliqhutshwa indlela drive, bangahluka - kusukela esebenzisa udizili injini, a uphethiloli noma kagesi. uhlelo ababhekene nesimo esinje kungabaduduza ngokuthi ngokuzenzakalelayo, kodwa umthwalo wemfanelo esiningi izinga lomsebenzi kanye umthwalo umsebenzisi, okwenza hhayi kuphela kokuqala kulungiselelwa izindlela futhi ulungisa kwemigomo zilima, kodwa futhi ilawula motor-block ngesikhathi ziba ngcono.
Ngaphambi kokuqhubeka ne ukutshalwa umhlaba, kumele ube bahlanganyele bamba, ukubeka ikhanda ukudlulisela "kokungathathi hlangothi" ibhokisi, qala injini wasiqashisa kulungele kancane. Impendulo yombuzo kanjani alime tillers, cishe ngaso sonke isikhathi kuhilela ukufakwa izincomo ijubane elikhulu lapho idrayivu uyakwazi yokusebenza izindwani. Lokhu ipharamitha eyonquma ubunjalo tillage inhlabathi. ijubane elijwayelekile ukulima kubhekwa yesibili - kutuswa ukwenza ukucutshungulwa naphakathi izinga nenhlabathi. Isibalo ematfuba ingahluka ngesikhathi ukuhlinzwa, kodwa kufanele ilawulwe ngokushintsha nemingcele ibhande yokudlulisela. Ukulungiswa ngokuvamile kwenzeka lapho beshintsha ukucutshungulwa ukujula noma ngenxa ubuchwepheshe inguqulelo kolunye uhlobo inhlabathi.
Ukubeka ukucutshungulwa nemingcele
Uma kucatshangwa ukwelashwa inhlabathi intombi, kuyinto efiselekayo ukufaka ukujula amancane uzizwa kanjani umshini uyakwazi ukubhekana inhlabathi ezinjalo. Emva ekucubunguleni obuncane umhlaba, kumele ube ukuchaza "ukhululekile" ukujula. Ukwazi indlela alime izwe uhambo-ngemuva ukuminyana ukhonkolo kanye nokusungulwa, kuzosiza ukusungula isikhundla elikhulu Izigayo futhi ngokufanele ulungise ngikwazi ukuqala. Okunye futhi okubaluleke ngokufanayo ububanzi ziba ngcono, okumele amisiwe ngokubeka eziningi ujikelezisa izindwani noma rotors. inombolo yawo izindlela ejwayelekile wokusebenza ziyahlukahluka kusuka 2 kuya 6. Kwenzeka ukuthi iyunithi iqala ukwandisa ngomzuzu injini ne ukunciphisa ngesikhathi esisodwa ukujula lapho ukwelashwa wenziwa. Kulokhu, kufanele bangcwabe ngikwazi ukuqala kwabo.
Ukuba khona igeja ekuklanyweni motor-block kakhulu ubabonisa amakhono ayo. Ukuze uqonde ukuthi igeja zilima ku tillers, kumelwe kuqala azijwayeze yayo inqubo emhlanganweni kuhilela ukufakwa ngalo mshini isici elihlangana.
Coupling nge igeja ngemuva kwalokhu kuzokwenza ukuxhumana izakhi motor-block. Ukuze wenze lo msebenzi kuzodinga ezifanele amabhowudu kanye iziqobosho. Kulesi sigaba okudingekile ukunquma futhi silungise ukujula machining. Lokhu kwenziwa ngokuqhathanisa izimbobo ihabhu e idivayisi elihlangana omunye emigodini igeja yokubeka - yasibamba eyenziwa umshudo kanye nut. Khona-ke ungakwazi hlola indlela okufanele sihambe ngayo-ngemva uyalima inhlabathi pliable uma izindlela ukubonisa ukusebenza efanele, usukulungele ukuqedela ukutshalwa endaweni.
Ukuqinisekisa ukuthi zonke izakhi ezisebenza kusekeliwe abethela, kungenzeka ukuqala zilima. Naphezu kweqiniso lokuthi iningi isikhathi ekuphatheni phansi uzobe kwenziwe igiya yesibili, kubalulekile ukwazi nokuthi alime motor-block gear kuqala. Ukuze wenze lokhu, ngomusa isibambo bamba bese usetha isikhundla elikhulu imoto. Kulesi imodi abasebenza emseleni kuqala. Ngokusho imiphumela, "ukuhlolwa" ukutshalwa kungenzeka ukuba bafinyelele iziphetho phezu kwakudingeka ukulungisa okuthile.
Uma umshini ime liqhubekela phambili, futhi zigweda umsiki, kubalulekile ukukhulisa ezingalweni zakhe futhi ukuphoqa ukuletha yezinga isikhundla. Ngokuvamile kwenzeka futhi ngeziphambeko esandleni - ingasekho, ngokuvamile kwenzeke anemifantu, okuyinto kakade ngaphansi kulinywe. Ngakho, kungase kube omunye umbuzo - indlela alime tillers, izindwani-rotary ku-awangeni phansi? Ukusiza kuleli can zokukhwabanisa ezifanele kuphela izibambo. Ngeshwa, ukulawula ngokucophelela kufanele kube kunoma iyiphi inhlabathi. Ngakho, eyawela enhlabathini okuxekethile kuyadingeka ukuqinisekisa ukuthi wokusika akusho ngena esijule kakhulu, futhi ukucutshungulwa nenhlabathi eqinile namazwe intombi kungenzeka kanye nesidingo ukwenza izindlela eziningi. Ukwelapha wokuqala desirably wenziwa ngesivinini aphansi, kubalulekile ngokufanele ulungise isikhundla futhi ngikwazi ukuqala.
Imibuzo eminingi sendlela alime kahle tillers, kuzosiza ukuxazulula design ulwazi imodeli ethize iyunithi. Kuyadingeka ukuba sicabangele nokuphepha, njengoba izindlela lobuchwepheshe iyinhlangano uhambo-ngemuva, ukusebenza kwe-okuyinto lihlotshaniswa ukujikeleza izakhi abukhali - the rotors, bezihlahla, imimese, njll ...
Okokuqala sidinga ukuqinisekisa ukuthi indawo etholakalayo ukucutshungulwa, azikho izingane noma nezilwane. Okulandelayo, hlola zonke izingxenye nokubopha - ikakhulukazi imishini yokugaya futhi rotors. Uma imodeli ifakwe izintambo ephezulu voltage negemfe qeda, bese uthinta kubo ngesikhathi umsebenzi engenakwenzeka. Futhi alime engadini motor-block Kunconywa igiya elifanele. Ikakhulu, i-elementi kumelwe abe outerwear ezimangelengele, nezicathulo nge yedwa kanzima futhi amagilavu. Lapho ekucubunguleni ngesikhathi izindawo empambana kanye nenhlabathi nge inhlabathi Stony kufanele uqaphele ikakhulukazi inqubo Goal. Uma kucatshangelwa iphathwa endaweni bokungafani ingozi ilele noma kukhube kakhulu anda.
Ashgabat: ezikhangayo, izithombe kanye nencazelo